ရယ်စရာများ – PwintsSan
ကိုရင်တတ်နဲ့ ကျောင်းဆရာမ တွေ့ကြလေသောအခါ
အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင်ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူးတယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ” “ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသားက သွေးတိုးရောဂါရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦင်္းညမှာ […]
ကံဆိုးမိုးမှောင်မကျမှီ အခြေအနေများမှာ အချိန်ကိုက် ရိုက်ကူးထားမိတဲ့ ဓာတ်ပုံများ
ဓာတ်ပုံတွေကိုကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားအတိုင်းရအောင် ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကြုံတဲ့အခါကြုံတွေ့လာတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုအချိန်ကိုက်ရိုက်ကူးဖြစ်ဖို့ဆိုတာပိုတောင်ခက်ခဲ ပါသေးတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ ကံဆိုးမိုးမှောင်မကျခင်အချိန်လေးတွေမှာအချိန်ကိုက်ရိုက်ကူးထားမိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရဲသားကြီးတစ်ဦးက သာမန်ရိုးကျတွေ့မြင်နေကျ မဟုတ်တဲ့ ရာဇ၀တ်သားကို ဖမ်းဆီးနေပုံပါ။ ရဲသားကြီးက ကားကို လမ်းဘေးထိုးရပ်ထားတုန်း (၆)ပေအရွယ်ရှိတဲ့ မိကျောင်းကြီးက အနောက်ကနေ တိတ်တိတ်လေး ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ မိနစ်(၂၀)နီးပါးလောက် အခုလိုအနေအထားမျိုးနဲ့ ရှိနေပြီးတော့မှ မိကျောင်းကြီးဟာ ရေထဲကို ပြန်ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ […]
May 14, 2018 twl 0
မေလ ၁၂ ရက်နေ့ကတာမွေ မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆန္ဒပြပွဲဟာရုန်းရင်းဆန်ခက် နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကိုတားဆီးနေတဲ့အချိန်မှာ ၊ အားရပါးရ ပြုံးနေတဲ့ပုံကတော့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့သွားသလို ၊ ပြုံးရယ်နေတဲ့ ရဲဝန်ထမ်းရဲ့ ပုံတွေကို meme ပြုလုပ်ပြီး ရှဲ တဲ့သူတွေလည်း အတော်များပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရဲဝန်ထမ်းဖြစ်သူ ကိုဝေယံ […]
ရွာထဲ စစ်​​ကြောင်းဝင် ​လာ ​တော့ ရွာသူ ရွာသားေ တွ ရုတ်​ရုတ်​သဲသဲဖြစ်​ ကုန် ​တယ်​
May 13, 2018 twl 0
မိန်းမတဦးက ထမိန်​တိုတိုလုံးပြီးရွာလမ်းအတိုင်း စစ်​သား​တွေ ဝင်​လာပြိစစ်​သား​တွေ ဝင်​လာပြီးဆိုပြီး ​အော်​ပါ​လေ​ယော ​ရှေ့ဆုံးကချီတက်​လာတဲ့ ​ရွှေဘ ​ခြေလှမ်းတွန့်​သွားတယ်​ ​နောက်​ကရဲ​ဘော်​​တွေပြန်​ကြည့်​​တော့လဲ မျက်​နှာပျက်​​နေတယ်​ ဒါမဲ့ဟန်​ကိုဖိုဆိုတဲ့အတိုင်း အိ​နြေမပျက်​ဆက်​​လျှောက်​ရတာ​ပေါ့ ခုနမိန်းမ​အော်လဲပီး​ယော ရွာသူရွာသား​တွေအလျှို အလျှိုနဲ့ထွက်​လာကြတယ်​ လက်​ထဲမှာလဲ လုပ်​လက်​စလုပ်​ငန်းကလက်​နက်​​တွေကိုင်​လို​ပေါ့ တ​နေရာအ​ရောက်​ ​ဈေးဆိုင်​​လေး​ရှေ့မှာခုန​အော်​​ပြေးတဲ့ မိန်းမနဲ့အတူ အခြားလူအုပ်​လဲ​တွေ့ရတယ်​ တာဝန်​အရ ​ရှေ့သာတက်​​နေရတာ​ခြေလှမ်းက​တော့ခပ်​ရွံ့ရွံ့ သူတို့အနား​ရောက်​​တော့ […]
May 10, 2018 twl 0
ကား​ပေါ်မှာ ကိုယ်​ကလည်း သီချင်းနား​ထောင်​ရင်း စီးလာတာ​ပေါ့. တမှတ်​တိုင်​​လောက်​​မောင်​အပြီးမှာ ​ဘေးကအ​ဒေါ်ကြီးက ကိုယ်​ကိုင်​ထားတဲ့ဖုန်းကို​တောင်းပါတယ်​ သူ့ကို​ပေးပါတဲ့ မ​ပေးရင်​ တခုခုလုပ်​လိုက်​မယ်​ဆိုပြီး​ပြောလာပါတယ်​.. ​နောက်​ပြီးကိုယ့်​​ဘေးက​နေရာလွတ်​မှာပဲဝင်​ထိုင်​တယ်​ ကား​ပေါ်မှာ လူကလည်းနည်း စပါယ်​ယာလည်းမပါ ယာဉ်​​မောင်းတ​ယောက်​ပဲ Cctv နဲ့အ​နောက်​တံခါးကိုကြည့်​ပြီး တမှတ်​ တိုင်​​ရောက်​တခါတံခါးဖွင့်​စနစ်​နဲ့​မောင်းလာတယ်​အဲ့လိုကား​ပေါ်မှာ ကိုယ်​ကလည်း သီချင်းနား​ထောင်​ရင်း စီးလာတာ​ပေါ့. တမှတ်​တိုင်​​လောက်​​မောင်​အပြီးမှာ ​ဘေးကအ​ဒေါ်ကြီးက ကိုယ်​ကိုင်​ […]
မိန်းမတွေ ချစ်လို့ မ၀နိုင်ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ ပြစ်မသွားနိုင်တဲ့ လင်ဖြစ်ဖို့……
May 7, 2018 twl 0
မိန်းမတွေ ချစ်လို့ မ၀နိုင်ဖြစ်ပြီး ဘယ်တော့မှ ပြစ်မသွားနိုင်တဲ့ လင်ဖြစ်ဖို့ ခင်ပွန်းကောင်းဆိုတာ 💝•နံနက်အိပ်ယာထတဲ့အခါ “ မင်းနေကောင်းလား၊ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော် ” စိုးရိမ်စကား ပြောပေးတတ်သူ။ 💝• နံနက်စာစားတဲ့အခါ “ ကော်ဖီ ၁-ခွက် ကို ၂-ယောက် တူတူသောက်ကြရအောင်ကွာ ” မျှဝေခံစားတတ်သူ။ 💝• […]
May 6, 2018 twl 0
သူပြောလိုက်တော့မှပဲနာမည်ကြီးဖုန်းတွေရစရာကိုမရှိတော့ဘူး ဖုန်းဆိုင်​ တစ်​ဆိုင်​သို့​လူတစ်​​ယောက်​ ဝင်​လာပြီး ​မေးသည်​” ​မောင်​ရင်​ ​စွေ​စောင်း ရှိလား ”ဆိုင်​ရှင်​က နားမလည်​စွာဖြင့်​” ဘယ်​က ​စွေ​စောင်းလဲ ?ကျ​တော်​တို့ဆီမှာ​စွေ​စောင်း ဆိုတဲ့လူ တစ်​​ယောက်​မှ မရှိဘူး ”” မဟုတ်​ဘူး​လေကွာ ​စွေ​စောင်း နို့ဖိုး ” ဆိုင်​ရှင်​က စိတ်​မရှည်​စွာဖြင့်​ ” ဒီမှာ […]